Fisafidianana asa marika 6 tsara | Famoronana an-tserasera
Isak'izay dia mila mijery isika ary mijery izay ataon'ny mpiara-monina. Mba hahitana, hamakafaka, hianarana ary hieritreretana ny fomba hanatsarana azy. Fanatanjahan-tena tsara izay ahazoantsika aina rehefa miresaka mametraka ny maha-izy anao.
Ity misy fifantina Asa marika 6 miaraka amina famaritana fohy. Manantena aho fa tianao izy ireo ary, ambonin'izany rehetra izany, manome aingam-panahy anao izy ireo.
Asa marika 6
Tangent Café, novolavolain'ny rantsan-jato arivo.
The Tangent Café dia trano fisakafoanana fisakafoanana ao Vancouver. Ny fampisehoana jazz dia atao eto, ny mampiavaka azy indrindra dia ny sakafo masaka ao an-trano sy labiera fampiasa amin'ny asa-tanana. Ny fanamby amin'ity tetik'asa ity dia ny famoronana toerana fandraisana olona tonga miteraka fahatokisana, hanamafisana ny lazan'olom-bolo nomen'ilay toerana.
Ireo mpamorona dia niara-niasa akaiky tamin'ny tompony mba hamolavola ny marika vaovao amin'ny trano, toetra hita maso izay maneho ny endrika ara-tsosialy mahazo aina tian'ny tompony hotanterahina.
Sary vaovao, miaraka amin'ny loko mitambatra izay manintona ny saina omena ny toetoetran'ny toerana (mavo?). Ny typografia, tsara tarehy.
Brox, noforonin'i Daniel Brox Nordmo.
Izy io dia ny mombamomba ny mpamorona sary. Io rehetra io dia tonga tamin'ny hevitra ny fampifangaroana sary maromaro izay ananako tao anaty kahie taloha ary hadio ara-pahitana izy rehetra. Ny kisarisary sasany dia nampiasaina ho pirinty ary ny hafa ho fanoharana.
Hita eto ny hasarobidin'ny fahitana amin'ny maso samy hafa ny zavatra ataontsika. Sariitatra vitsivitsy hadino tao anaty kahie no nahatonga ny maha-izy azy tsy misy dikany sy manaitra tokoa.
Identity for Dylan Culhane, noforonin'i Ben Johnston
Ny fampahalalana momba ity mombamomba anao vaovao ity dia ny famoronana sary mirindra ny stationery matihanina miaraka amin'ny fomban'ilay mpaka sary, izay tsy maintsy nanintona ny saina tamin'ny fahitana azy voalohany. Ny hevi-dehibe dia ny fampifangaroana ireo hevitra mifanohitra amin'ny fametrahana mazava tsara sy voajanahary, andry fototry ny asan'i Dylan. Ny tolo-kevitra dia nanolotra rafitra maodely azo ovaina arakaraka ny tetikasa na ny mpanjifa. Ny logo dia misy singa maromaro izay mamela safidy maro ho an'ny fifandraisana, marketing ary ny fonosana mahazatra.
Hitako fa sarotra be ny misafidy loko mavo izay tsy mangorakoraka. Ity no marina.
Tongotra Emporium, noforonin'i FoundryCo
Emporium Pies dia mpivaro-mofo iray. Ny marika dia noforonin'ny mpamorona miaraka amin'ny tanjona hisolo tena ny kalitaon'ny mofomamy.
Tiako ny fomba nampiharan'izy ireo ireo voninkazo nandritra ny maha-izy azy.
Identity ho an'i Augie Jones, noforonin'i Mijan Patterson
Augie Jones dia fromazy manokana. Ny maha-izy azy dia taratry ny vokariny, avo lenta. Ny mari-pamantarana dia miorina amin'ny typeface vita tanana, izay mampita ny fanahy voajanaharin'ny orinasa. Ity fotokevitra ity koa dia manamafy ny paleta miloko ampiasaina: ny tonony tsy miandany.
Ataoko fa efa fantatrao izao, fa… tiako ilay sary famantarana. Hividy ny sakafony aho.
Famantarana Animup, noforonin'i Isabela Rodrigues
Animup dia orinasam-pamokarana audiovisual iray mikendry ny Startups. Vaovao izy io, maoderina, kanto. Mba hanomezana ireo toetra ireo amin'ny mombamomba ny marika, Isabela nanangana indray ny sary hamorona singa iray matanjaka kokoa. Mba hialana amin'ireo loko miharihary kokoa dia voafantina ny loko mahazatra ny taona 60.
Safidy lehibe loko, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fisafidianana asa marika 6 tsara